Mifantoha i Jesosy | Apg29
Izay mandresy amin'ny fitoriana momba ny politika ara-tsosialy, Agenda 2030 sy ny toetrandro?
Ela ve ianao fa i Jesoa Kristy dia ho avy indray? Moa ny fonao mifantoka kokoa ny zava-manahirana eto an-tany fa ny olana sy ny toetr'andro Agenda 2030?
Isika dia miaina ankehitriny ao anatin'ny tontolo iray izay mahita ny olona miaina ao anatin'ny tebiteby. Ary rehefa namaky ny Baiboly aho, dia milaza hoe:
"Toetra haneho ny tenany amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ an-tany ny jentilisa no ho amin'ny tebiteby sy very hevitra, ny ranomasina sy ny onja. Olona dia ho breathless amin-tahotra eo amin'ny mialoha ny zavatra hanjo an'izao tontolo izao, fa ny herin'ny lanitra dia hohozongozonina. dia hahita ny Zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe. fa rehefa hitranga manomboka izao, dia hanitsy ka asandrato ny lohanareo; fa manakaiky ny fanafahana anareo. " Lioka 21: 25-28.
Hifantoka amin'ny toetr'andro?
Hitantsika ankehitriny, ny olona izay manana fanahiana ny zava-mitranga ho an'ny toe-draharaha, ary izay afaka hitory ny Evanjely tsy momba Agenda 2030 na ny toetr'andro politika. Tsy tokony hifantoka amin'ny tontolo iainana, Agenda 2030, na ara-tsosialy ny politika, fa ny mifantoka dia ny manana ny masonareo i Jesoa Kristy sy ny fiaviany. Izay mandresy amin'ny fitoriana momba ny politika ara-tsosialy, Agenda 2030 sy ny toetrandro?
Isika Kristianina dia tokony tsy hamela amin'ny fanahiana ho amin'izao tontolo izao ny ankizy. Ny mameno ny fon'ny olona no lazain'ny vavany hoy matetika. Ela ve ianao fa i Jesoa Kristy dia ho avy indray? Moa ny fonao mifantoka kokoa ny zava-manahirana eto an-tany fa ny olana sy ny toetr'andro Agenda 2030? Hoy i Jesosy:
"Ary mitandrema ianareo noho ny milanja ny fonareo amin'ny carousing, fahamamoana ary ny fanahiana eo amin'ny fiainana izany andro tampoka aminareo tahaka ny fandrika, fa hisy fiantraikany mponina rehetra manerana ny tany. Aoka ho foana hifoha ary mivavaka mba hahazo hery handositra rehetra te-ho hitranga ary hitsangana eo anatrehan'ny Zanak'olona. "
Raha tokony hiresaka momba ny olana ara-tsosialy, ny toetrandro ny olana sy ny sisa, dia aoka isika hitory momba ny fanjakan'ny lanitra. Indray andro, i Jesoa Kristy dia ho avy indray ka haka ny ampakarina tena ianao vonona ho amin'izany andro izany? Sa moa no manana bebe kokoa mifantoka dia ny Antikristy?
Ny fampakaram-bady any an-danitra
Iriko ny ho any an-danitra ao amin'ny fanambadiana, ary ny mifantoka ianao dia ho andro i Jesoa Kristy no haka ny ampakarina! Mifohaza, ianareo izay matory ela toy izany koa i Jesosy Kristy, Mpanjakan'ny Mpanjaka indray. Eto amin'ny farany, ny sasany andinin-teny mba hamaky sy hisaintsaina.
2 Pettrusbrevet 3: 3-4 Ambonin'ny zava-drehetra, dia tadidio fa amin'ny andro farany dia ho mpaniratsira, tarihin 'ny faniriany, ka izay maneso anao, ary nanontany hoe: "Ahoana ny teny fikasana ny amin'ny fihaviany? Ny razanay no efa maty, ary ny zavatra rehetra dia tahaka ny efa hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. "
1 Tesalonianina 5: 2-3 fa fantatrao tsara fa ny andron'ny Tompo dia tonga toy ny mpangalatra amin'ny alina. Fotsiny ny olona hoe: "Ny zava-drehetra dia milamina sy azo antoka," ary loza ho tampoka toy ny mihetsi-jaza ny vehivavy, rehefa hiteraka, ka tsy ho afa-mandositra.
Matio 24: 29-30 vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro hohamaizinina, ary ny volana tsy haneho fahazavana. Ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. Ary amin'izany ny Zanak'olona tarehin-tsoratra hita ao amin'ny lanitra, dia vao ho ny firenena rehetra ambonin'ny tany hisaona, ary hahita ny Zanak'olona avy eo amin'ny rahon'ny lanitra amin-kery sy voninahitra lehibe.
2 Timoty 3: 1-5 koa fantaro izao, fa amin'ny andro farany Efa tonga ny fotoana sarotra. Ary ny olona dia hieritreritra afa-tsy ny tenany sy ny vola; izy ireo ho mpandoka tena, mpiavonavona, mpampahory, tsy manoa ray aman-dreny, tsy mahay mankasitraka, ratsy fanahy, tsy misy fitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika feno, voafehy, mahery setra, tsy noho ny tsara, mpamadika, malina sy mieboebo. Tia fahafinaretana mihoatra noho Andriamanitra. Izy ireo ho toy ny toe mitondra saron-tava nefa nandà ny heriny. Alaviro ireo.
Daniela 12: 4 Fa ianareo kosa, ry Daniela, dia tsy maintsy mitandrina ny teny ary asio tombo-kase ny boky, mandra-pahatongan'ny fotoana farany. Maro no, ary ny fahalalana no mampitombo. "
Lioka 21: 25-26 dia ho famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ny tany dia ny hafa firenena ho amin'ny tebiteby sy very hevitra, ny ranomasina sy ny onja mierona. Ny olona ho faty ny tahotra amin'ny mialoha ny zavatra tonga ambonin'ny tany; fa ny herin'ny lanitra hohozongozonina.
Matio 24: 42-44 Koa amin'izany miambena, fa tsy fantatrareo izay ora hihavian'ny Tomponareo. Any no hahatakatra fa raha fantatry ny tompon-trano amin'ny firy ny alina ny mpangalatra tonga, izy fa hifoha hatrany sy tsy nivadika izy tao an-trano. Ary noho izany koa ianareo ho vonona, satria rehefa manantena kely indrindra izany, raha ny no hihavian'ny Zanak'olona.
Matio 24: 23-24 Raha nilaza ianareo: Ianao no Kristy, na ny any, tsy mino izany! Diso mpamonjy sy ny mpaminany sandoka, no hanao famantarana lehibe sy fahagagana hamitahany, raha azo atao ny olom-boafidy.
1 Jaona 2:18 Anaka, izao no ora farany. Efa renareo fa antikristy ho avy, na dia ankehitriny aza maro no antikristy efa tonga. Avy izany no mandre fa amin'ny fotoana farany.
Izany no mpamaky iray mailaka, ny fomba fijery mahazo ny mpanoratra mba hijoro amin 'ny.